တယ်လီဖုန်း | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
Nice Post Ma Ma !!I am one of ur reader .I always come to ur place but never leave the comment .This is the my first time comment !!I was growth with Saya Gyee Tin Moe's poems so when i read ur post , i feel friendly with u even we don't know each other !!
fantastic and I see and feel telephone from you post.
ရုံးမှာဖုံးခဏခဏပျောက် တဲ့ အမကြီးကို အကြံပေးဖူးတယ် လည်ပင်းသာဆွဲထားလိုက်ပါလို့။
တစ်အားမေ့တတ်ရင်တော့ ကျနော့အဖွားလို မျက်မှန်သုံးလက်သာဝယ်ထားပါတော့ဗျာ
ကျွန်တော်တော့ ဖုန်း သက်သက်ပဲ သုံးချင်လို့ ဒါကိုသုံးပါတယ်။ ဘာ အပို ဖန်ရှင်မှ မပါပါ။
မမကိုယ်တိုင် ဒီဇိုင်းထုတ်တဲ့ ဖုန်းထည့်ပြီး
လည်ပင်းမှာ လွယ်တဲ့အိတ်လေးတွေ ရှိတယ်
ကြိုးလှလှလေးဝယ်ပြီးတော့ လည်ပင်းမှာဆွဲထားလိုက်လေ အစ်မ ။ ဖတ်ပြီးတော့ ပြုံးသွားတယ် ။ ဟုတ်ပ ။ သူ့ကုသိုလ်နဲ့သူ ဖြစ်လာတာ ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲ ။ :) :)
kiss phone လေး တလုံး ပို့ ပေးလိုက်မယ်နော် ။
ဖုန်းကလေး ကို ဖုံးဖုံးဖိဖိ လေး ထားပေးလေ ။
ဟုတ်ပ မရှိ မဖြစ်လို့သာ သုံးနေရတယ်နော် ။
ခုခေတ်ဖုန်းတွေက ဘာတွေမှန်းမသိ ရှုပ်ရှက်ခပ်နေတာ။
မပေါင်းလည်းခက် ပေါင်းလည်းခက် :P
ရေးထားတာလေးက ကြည်နူးဖို့ကောင်းပါတယ်၊ အိမ်က ဖေဖေကိုလဲ လွမ်းလိုက်တာ၊
အဘွားအိမ်က ဂျောက်ဂျောက်နဲ့ လှည့်ရတဲ့ အမဲရောင် ဖုန်းကြီးရောပဲ၊ ဒီတခါ အိမ်ပြန်ရင် အဘွားကို ကပ်ချွဲပြီး တောင်းကြည့်ဦးမယ်၊ အခု ဖုန်းလေးတွေ ကိုင်ရတာ ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်နဲ့၊ အဲ့ဒါကြီးကို အားရတယ်၊ ဟဟ...
ခင်ဖူးတဲ့ ကလေးလေးက ဖုန်းပျောက်တော့ ဆရာလုပ်တယ်၊ ခေါင်းလောင်းဆွဲထားပါလား တဲ့
အေးလေ မချိုသင်းက လမ်းလျှောက်ချင်တဲ့ ဟာကို အကိုကြီးက အလိုက်မသိဘူး.. အတင်းလိုက်ပို့လိုက်ကြိုနေတာပဲနော်..း))
may zin said...
အစ်မ ရေ... လမ်းလျှောက်ပြီး လာကြိုခိုင်းပါလား ...အဲ့ဒါဆို..အဖော်လဲ ရှိ..လမ်းလဲ လျှောက်ဖြစ်တာပေါ့..း)
Pearl ကထုတ်တဲ့ RX-80 PICO လည်း ဖုန်းပြောတာနဲ့ message ပို့တာပဲရတယ်။ သေးသေးလေး။ ၄၀ ဂရမ်းပဲလေးတယ်။
မကို ချစ်ခင်သူတွေက လမ်းလျှောက်ခိုင်းနေကြတယ်နော်
ကျွန်မ ကတော့ ပြောတတ်ပါဘူး။ :)
တစ်ခုပဲ မရေ...ဆရာကြီးဦးတင်မိုးနဲ့ကျွန်မ ဖုန်းသုံနည်း သိပ်မကွာဘူး။ :D
မချိုသင်းရေးတဲ့စာတွေက အမြဲတမ်းမျက်စိထဲမှာ ပုံပေါ်တယ်..
မချိုသင်းဖေဖေ ဖုန်းပြောတာကိုဖတ်ပြီး ဟာသတပုဒ်သွားသတိရတယ်..
"တောကဘကြီးတယောက် မြို့ကိုအလည်လာတုန်း သူ့ဆီဖုန်းလာတယ်တဲ့.. သူဖုန်းထူးနေတာကို ဘကြီးရဲ့ တူလေးကတွေ့တော့ ဘကြီးဖုန်းပြောတာ ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ် လို့ပြောတော့ ဘကြီးက ဟယ်လို ဟယ်လိုလို့ ထူးနေတာကနေ လိုဟယ် လိုဟယ်လို့ ပြောင်းထူးတယ်တဲ့..."း)
မမ.. ညီမ ငယ်ငယ်က ဖုန်း စပြောရမယ်ဆိုတော့ ခေါင်းထဲမှာ အသေမှတ်ထားတာက ကြိုးတွဲလောင်း ကျတဲ့ဖက်သည် ပါးစပ်မှာ တပ်ရမယ့်ဖက်၊ ဒါဆို ပြီးပြီ...။
မပြုံးဘဲ မနေနိုင်အောင် မမရယ်။
အမလည်း အပြုံးပန်းလို ကြော်ငြာဝင်တယ်နော်။
နောက်ဆုံးစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းကို ပြောတာ။ :P
အစ်မရေ ဖုန်းသရဲရောမလာဘူးလား။ ဖုန်းခဏခဏ ပျောက်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးက ဟမ်းဆက်ကောင်းကောင်း မကိုင်နဲ့ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း ခဏခဏ ပြုန်ကျတတ်တယ် အစ်မ ဒါကြောင့် ဖုန်းမှာဆို ကြောင်ခြစ် ရာလေးတွေနဲ့ပေါ့။
ဟေမာနေ၀င်းသီချင်းလေးတောင် သတိရသွားပြီ။ ကားနက်ကြီးပေါ်လာတာ ဖတ်ရတဲ့သူတောင် လန့်သွားတယ်။
အမရေ ဟုတ်တယ် ကျနော် ဖုန်းဆို ခဏခဏ ကျလွန်းလို့ ဖုန်းရုပ်တောင်း မပေါ်တော့ဘူး။
ခုတော့ ကားနက်ကြီး ကို ကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်
Mandalay Inn said...
Dear Ama Moe Cho Thinn,,
I still remember uncle U Tin Moe Last visit in Siem Reap....We do had nice chat... I have learnedalot from him duringashot conversation..
Umm...seems like yesterday..
ကျနော်လဲ ဖုန်းခဏ ခဏ ပြုတ်ကျတတ်တယ်..
ချိုသင်းရေးတာဖတ်ပြီး ဟိုးအရင်ကဖုန်းတွေကိုလဲပြန်သတိရလို့..။ ဆရာကြီးကိုလည်း ချစ်..ဆရာ့သမီးလေးကိုလည်း ချစ်လိုက်တာ..ရိုးသားဖြူစင်ကြလွန်းလို့..။
တို့တွေလည်း ဖုန်းကအိမ်မှာတင် ပျောက်ပျောက်နေတတ်တာ..အပြန်သွားခါနီးမှ အိမ်ဖုန်းနဲ့ ပြန်ခေါ်ကြည့်ရတယ်..နှိုးစက်လည်းလုပ်၊ သီချင်းလည်းနားထောင်၊ ဂိမ်းလည်းဆော့ဆိုတော့ တခါတလေ ဘယ်နားချမိမှန်းကို မသိ..:)။ အပြင်သွားရင်တော့ ဖုန်းထည့်ဖို့ ဘေးအိတ်ပါတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ပဲသုံးတော့ အပြင်မှာပျောက်ဖို့တော့သိပ်မပူရဘူးပေါ့..။ အဲဒါကလည်း တခါလောက် လမ်းမှာပြုတ်ကျကျန်ခဲ့ပြီးမှလေ..ဟဲဟဲ
သူလဲ memory stick လိုပဲ :) နည်းပညာတိုးတက်လာတို့ ဖုန်းက သေးသေးသွားတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ မကြိုက်ဘူး။ ဘယ်နားထားမိမှန်းမသိလို့။ ဖုန်းအကြီးကြီးတွေ ကိုင်ပေါ့။
“အခု ပြောနေတာ ဦးတင်မိုးဖုန်းကပါ၊ မက်ဆေ့ခ်ျ မသွင်းခဲ့ပါနဲ့ရှင်။ အဖေ ပြန်မခေါ်တတ်ပါဘူး”
......ရီသာရီနေတယ်...... ကျွန်တော့်အမေလဲ ထိုနည်းတူပါပဲ..... အခုတော့ အကြံရပြီ။ အမအတိုင်း Message သွင်း ပေးလိုက်မယ်။ :D :P
ခုဖုန်းအကြောင်းပြ လူဆိုးတွေပဲလိုက်ခံရသလိုလို အကြောင်းပြပြီး လာကြိုခိုင်း လာပို့ ခိုင်းတယ်။
နောက်တခါဆို သင်တန်းမှာ ဘာညာ အကြောင်းပြပြီး
ကိုဝဏ္ဏပါ zumba တက်ခိုင်းမှာ မြင်ယောင်တယ်။
ဟလို .... မကြားရဘူး။
အိတ်ချိန်းကလား ဟုတ် ရန်ကုန်နဲ့ ပြောမယ်။
ဟလို ဟလို ဟလို ဟာ လိုင်းကျသွားပြီ။
လိုက်ကြို့... လိုက်ပိုလုပ်ပေးအောင် ...
တမင်တကာ ဖုန်းကို လွှင့်ပစ်ခဲ့တာမဟုတ်လား...
ဘာဖြစ်လို့ဒီိလောက်တောင် စာရေးတတ်တာလဲးးးးး”
ကြောက်လန့် တစ်ကြားပြေးလွှားနေပါသဖြင့် ခေါ်ဆိုရွေ့ မရနိုင်ပါရှင်...ရှင့်”
ကျနော်ကတော့ ဖုန်းကိုလုံးဝမ မကြိုက်ဘူး
ဖုန်းထဲမှာ စကားပြောနေတာထက် လူကိုပြေးတွေ့ချင်တဲ့စိတ်ပဲပေါက်တယ်
ဒီကမြန်မာတွေကို သိပ်ဖုန်းနဲ့ စကားမပြောတော့ သူတို့လဲ မဆက်ကြပါဘူး ဆက်လဲ အင်းအား အဲ နဲ့ ပီးနေတာပဲ...
ဖုန်းနဲ့ ကျနော်က သူတခြားကိုယ်တခြား
မကြီးချိုသင်း အားပေးစကားများအတွက် ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ...
အခုတော့ အနည်ထိုင်နေပါပြီး ကျောက်ချဉ် စိမ်လိုက်ပြီးလေ...း)
ဖုန်းအသစ်ကို လှမ်းခေါ်နေတယ်နော်...း)
ဖုန်းက တကယ်ပဲ သာဓုခေါ်ချင်စရာကောင်းတဲ့ တီထွင်မှုတခုနော်..
ခုဆို ရုပ်ကိုကြည့်ရင်းပြောလို့ရတဲ့ ဖုန်းတွေတောင် ပေါ်လာပြီဆိုတော့ ချစ်ခင်သူတွေကို နီးသွားစေတာပေါ့နော်...
အမကရေးတတ်လွန်းတော့ သက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ဖုန်းတောင် အသက်ဝင်လာတယ်အမရယ် အမြဲတမ်း အားပေးနေတယ်အမ
i always put my phone in my jeans back pocket. and washed it about3times :)
Par Gyi is using my old phone and he thinks its key pad is too small for his fingers so he nvr text me :D
ဖုန်းအကြောင်းလေးလာဖတ်သွားပါတယ် ၊၊ ငယ်ငယ်တုန်းက သိုးမွေးလက်ကိုင်ပ၀ါလေးနဲ့ အုပ်တယ်ဆိုတာလေးတွေ့တော့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ဒီစနစ်တော်တော် ထွန်းကားခဲ့ပါလားမှတ်ရ
ဖုန်ထုတာကိုး အစ်မရဲ့ ဟာဟ
အစ်မဘလော့လေးကို လင့်လည်းထားပါတယ်နော် ၊၊ အသိပေးတာပါ အစ်မရေ၊၊
Ma Moe Cho Thin yay,
I read your Blog usually, but haven't write comment yet.
Ah ma yay dae sar lay twe yaw, ah phyit ah pyat lay twe ka par, chit sayar lay twe ah myay phit nay dae naw. Ma pyaw pae ma nay ng top lo par :)
Sate tha ball htar phyu lite kya dar naw ...
အမ ချိုသင်း ရေးထားတာလေး ဖတ်ကောင်းလိုက်တာ၊:)
အမ အခုတော့ဖုန်းကမရှိမဖြစ်နော်။ မပျောက်အောင်သူများတွေပြောသလို လည်ပင်းလွယ်သွားလေ။ :P
ဖုန်းအကြောင်းကို ဖုန်းဖုန်းဖိဖိ ဖတ်သွားတယ်နော်..(ဆိုဒ်ထဲကနေ ဖတ်နေတာ..လူကြီးသိသွားမှာဆိုလို့ဗျ)
မချိုသင်းပြေးတဲ့ပုံ မြင်ယောင်ပြီး ရီလိုက်ရတာ (ကန်တော့ပါနော် အမရေးတာ အသက်ဝင်လွန်းလို့ပါ)
ရုပ်ရှင်တွေက တကယ် ထိရောက်တယ်နော် x file ထဲကလိုတွေ ဖြစ်မှာ သိပ်ကြောက်တာပဲ။
မမရေ မေလေးလဲ ဖုန်းအကြောင်းဖုန်းဖုန်းဖိဖိ ဖတ်သွားပါတယ်။ လက်တဘက်က မောက်လ်ကို အသင့်ကိုင်ထားတယ်။လူလာရင် ပိတ်လို့ရအောင်။ရုံးကနေ ခိုးဖတ်နေတာမမရေ။ မေလေးလဲ ဒီရောက်မှ ဟန်းဖုန်းကိုင်ဖူးတာမမရေ ။ ပြုတ်ကျတာတော့ အခါပေါင်း မနဲဘူး။လူသာဆိုဆေးရုံကတောင်ဆင်းရမှာ ဟုတ်ဘူး။
(တကယ်ကြီးချစ်တာနော်။ ဟိုတလောကကွယ်ကွယ်လေးထိုင်နေတဲ့ပုံလေ။အဲဒီပုံမြင်ပြီးထဲက ပိုချစ်သွားတာ တကယ် သိလား)
ကျနော်လည်း ဒီဘက်ရောက်လာမှ ဖုန်းနဲ့ ကံနဲ့ ။ :D
အစ်မ MCT အရေးအသားလေးတွေ သဘောကျကျနေမိတယ် ၊၊ ဂရေဟမ်ဘဲလ် မှာကျေးဇူးရှိတယ် ၊၊ ဆပ်လိုက်အုံးနော် ၊၊ :-)
ကတုံး ကတုံးတယ်လီဇုန်း ရန်ကုန်မြို့ကိုဆက်ပါဦး
သမီးနဲ့ လူကြီးမင်းနဲ့ပဲ တိုးနေတော့ ...ညစ်ရတယ် မချိုရေ.....
ဖုံးရာဇဝင် ကိုဖတ် ရတာ တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ မြန်မာပြည်တုန်းကတော့ ညဆို ဖုံး ကြိုးကိုဖြုတ်ထားတယ်။ အချိန်မတော်ခေါ်ကြလွန်းလို့။ ဒီမှာတော့ မှာအချိန်ပြေ့ silent mode ထားတယ်။
mobile phone (cell phone: USA, hand phone: Burma) လဲ ခါးကနေပြုတ်ကျဘူးတယ်။ Tesco ထဲ မှာ။ လူတွေကအော်ပြီးလိုက်ပြောကြတာ လန့်တောင်သွားတယ်။ လူကိုများ idiot ကျနေတာပဲ။ အဲလို အော်မဲ့အစား မသိသလိုနေကြရင်တောင်ခပ်ကောင်းကောင်း။ phone ကဘာမှမတန်ပါဘူး။ အမြဲအစုပ်ပဲကိုင်တာ။
ဘာအကြောင်းရေးရေး အစဉ်အမြဲ ချစ်စရာတွေကောင်းနေတော့တာပါပဲ...
အဖေနဲ့ သမီး... ခေါင်းချင်းတိုးဝှေ့ပြီး ဖုန်း ကင်မရာနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်နေကြတဲ့ပုံ... ဖုန်းထဲမှာ Wall Paper အဖြစ်တင်ထားတဲ့ပုံ ကို တွေးမြင်ကြည့်နေမိတယ်...
အခု ချိုသင်းက ဖုန်းအသစ်နဲ့ပေါ့... ဟဲဟဲ
ုဖုံးဖုံးဖိဖိနဲ့ ဖုန်းလာဖတ်သွားတယ် အမရေ ဘယ်လိုပဲရေး ရေး ဖတ်ချင်စရာကို ဖြစ်လို့
(မျက်စိထဲမှာ..ချိုသင်းရဲ့ ပုံစံကိုမြင်ပြီး ရီချင်နေတယ်)